Iibka xoolaha ayaa xiliyadan oo kale waxa ku yimada sare u kac( Nur Ali Farah/Radio Ergo) Nugal 02 Nov, 2011Qiimo Koror xooggan ayaa laga dareemayaa suuqyada lagu kala iibsado xoolaha nool ee ku yaalla magaalada Garowe, waxaana arrintaan ay salka ku haysaa xoolihii laga keeni jirey miyiga oo aad u yaraaday.
Waayadii hore, xilli roobaadka dayrta ayaa suuqyada xoolaha lagu kala iibsado waxaa looga bartay xoolo qiimahoodu aad u jaban yihiin, waxaana muddo laba bilood ah gudahood ku darsamay qiimihii lagu kala iibsan jiray xoolaha lacag gaaraysa 400 oo shilin soomaali ah, taasoo ay walaac xooggan ka muujiyeen dadka had iyo goorba ku xiran sayladaha lagu kala iibsado xoolaha.
Sida ay tahay xaaladda suuqa weyn ee Garowe, waxaa raadiyaha ERGO uga warramay C/nuur Maxamed Maxamuud, oo ka mid ah dadka loo yaqaan dullaalayda kala iibisa xoolaha “bilooyinkii ugu dambeeyay qiimaha xoolaha aad ayuu kor ugu kacay, xoolihii laga keeni jiray Miyigana way yaraadeen abaaraha dartood”.
Cabdi Geelle Gacal, oo ka mid ah dadka reer miyiga ah ee had iyo goor xoolaha iibka u keensada suuqaasi ayaa isagana sharraxaya saameynta ay reebeen qiimo kororka ku yimid xoolaha “Reer miyigu hadba si buu xoolaha hadba u gataa mar waa jiilaal mar waa abaar marka qiimaha wuxuu isku baddalaa hadba sida ay xoolaha u yaraadaan amaba u soo kordhaan”. Qiimo kororkaan ku yimid xoolaha suuqyada Garowe, ayaa waxaa kala mid ah suuqyada kale ee gobollada Puntland, waxaana arrintaan ay ku soo aadaysaa xilli ay socoto daabulkii xoolihii xilliga xajka dalka dibbadiisa loo dhoofin jiray.
Mohamed Abdullahi Kooshin/MG/FM